Dad uu soo ritay Cudurka Shubanka oo la gaarsiiyay isbitalka Hooyada & dhalaanka… – SBC
Dad uu soo ritay Cudurka Shubanka oo la gaarsiiyay isbitalka Hooyada & dhalaanka…
Muqdisho- Isbitalka Hooyada iyo dhalaanka magaalada Muqdisho caasimada dalka ayaa waxaa la gaarsiiyay in ka badan 150 Qof oo uu soo ritay xanuunka shuban biyoodka loo yaqaano.
Dr Luul oo ka tirsan saraakiisha isbitalka Hooyada iyo dhalaanka ayaa u sheegtay Xafiiska SBC International ee magaalada Muqdisho in dadkan korka u dhaafaya 150ka qof ay isugu jiraan caruur iyo dadwaaweynba islamarkaana uu said u hayo cudurka Shubanka .
Waxay ditooreysadu intaasi ku dartay in ay u badan yihiin caruur dadka qaba cudurkan, uuna ka dhashay cudurkan shubanka ah kuleylaha ka jira magaalada Muqdisho, ama inta badan xiliyada jiilaalka ah in ay dhashaan cuduradan.
Hadii aysan helin Daryeel iyo daawo ku filan dadkan uu soo ritay cudurkan waxaa suuro gal ah in trirada uu so ritay ay intaasi ka sii badato.
Dadka Soomaaliyeed ee qaabka barakaca ah ugu dhaqan qeybo badan oo ka mid ah dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho waxaa ay halis ugu jiraan inta badan cuduro iyo waxyaabaha qatarta ku keeni kara nafsadooda.